Ukuthengiswa kwePhepha kwabaQalayo-Yenza eyona NZUZO! Oktobha 2021
Funda ngesiKhokelo soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-2021!
19 May 2020 | Ukuhlaziywa: 11 Juni 2021
Kwisikhokelo sethu sokuFunda soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-2021, sichaza yonke into ekufuneka siyazi malunga neakhawunti yeedemo eziphilayo. Sikunika isikhokelo senyathelo nenyathelo malunga nendlela onokuthi uqalise ngayo ngeqonga lokuthengisa iphepha, kunye nabathengisi abahlanu ababalaseleyo ukwenza oku.
Abarhwebi abaziiPhepha eziPhambili ze2021
Awunalo ixesha lokufumana i-akhawunti yokurhweba ephepheni ephezulu? Ukuba kunjalo, apha ngezantsi uya kufumana abaxhasi bethu be-akhawunti yokuthengisa iphepha abahlanu be-2021.
I-Capital.com yi-FCA elawulwa ngumthengisi kwi-Intanethi enikezela iimfumba zezixhobo zemali. Zonke zikwimo ye-CFDs-oku kugubungela isitokhwe, ii-indices, izinto zorhwebo, kunye nokugcina imali. Awuyi kuhlawula ipeni enye kwikhomishini, kwaye ukusasazeka kuqinile. Izixhobo zoncedo zikwanikezelwa-ngokuhambelana ngokupheleleyo nomda we-ESMA.